रीटर्जेटि and र पुन: बजारका बारे जान्नुपर्ने सबै कुरा! | Martech Zone
के तिमीलाई थाहा थियो केवल २% आगन्तुकहरूले खरिद गर्छन् जब तिनीहरू पहिलो पटक अनलाइन स्टोरको भ्रमण गर्छन्? वास्तबमा, 92% उपभोक्ताहरू पहिलो पटक अनलाइन स्टोर भ्रमण गर्दा पनि खरीद गर्ने योजना नगर्नुहोस्। र उपभोक्ताको एक तिहाइ जो खरीद गर्न को लागी, शपिंग कार्ट त्याग्नुहोस्।
तपाइँको आफ्नै खरीद व्यवहार अनलाइन पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् र तपाइँ प्रायः ब्राउज गर्नुहुन्छ र उत्पादनहरू अनलाइन हेर्नुहुन्छ भनेर फेला पार्नुहुनेछ, तर त्यसपछि प्रतिस्पर्धीहरूलाई हेर्नको लागि छोड्नुहोस्, payday को लागि पर्खनुहोस्, वा केवल तपाइँको दिमाग परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसोभए, यो प्रत्येक कम्पनीको उत्तम रुचिमा छ तपाईको पछि लाग्नु एक साईट तपाईले भ्रमण गर्नु भएको कारण तपाईले त्यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो जुन तपाईको उत्पादन वा सेवामा रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। त्यो खोजी retargeting… वा कहिलेकाँही पुन: बजारका रूपमा चिनिन्छ।
फेसबुक प्रणाली र गुगल विज्ञापनहरू जस्तै विज्ञापन प्रणाली तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा राख्न एक स्क्रिप्ट प्रदान। जब एक आगन्तुक तपाइँको साइट भ्रमण गर्दछ, एक स्क्रिप्टले आफ्नो स्थानीय ब्राउजरमा एक कुकी डाउनलोड गर्दछ र एक पिक्सेल लोड हुन्छ जसले डेटा प्लेटफर्ममा फिर्ता पठाउँदछ। अब, जहाँ पनि ती व्यक्ति वेबमा जान्छन् उही विज्ञापन प्रणाली डिप्लोय गरिएको छ, एक विज्ञापन प्रदर्शन गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई देखाइएको उत्पादन वा साइट सम्झाउने प्रयास गर्न।
तपाईंले सम्भवतः यो याद गर्नु भएको छ जब तपाईं अनलाईन किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं साइटमा बुटहरूको एक राम्रो जोडी हेर्नुहोस् र त्यसपछि छोड्नुहोस्। तर एक पटक तपाईले छाड्नु भएपछि, तपाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र अन्य प्रकाशन अनलाईनमा बुटको लागि विज्ञापन देख्नुहुनेछ। यसको मतलब ई-वाणिज्य साइटले retargeting अभियानहरू लगाएको छ। एक नयाँ आगन्तुक हासिल गर्न कोशिस गर्नुभन्दा अवस्थित विजिटरलाई पुनः सुरु गर्ने लगानीमा धेरै उच्च फिर्ता हुन्छ, त्यसैले ब्रान्डले सबै समयमा यो प्रविधि प्रयोग गर्दछ। वास्तबमा, retargeted विज्ञापन क्लिकहरु को लागी। 76% अधिक सम्भावना हुन्छ सामान्य विज्ञापन अभियानहरू भन्दा फेसबुकमा।
र यो उपभोक्ता ई-वाणिज्य साइटहरू मात्र होइन कि retargeting अभियानहरू लागू गर्न सक्छन्। यहाँ सम्म कि B2B र सेवा कम्पनीहरु अक्सर retargeting तैनात जब आगन्तुकहरु एक अभियान अवतरण पृष्ठ मा अवतरण। फेरि, तिनीहरूले उत्पादन वा सेवामा चासो देखाएका छन् ... त्यसैले तिनीहरूलाई पछ्याउन प्रभावी छ।
Retargeting र पुन: बजार अभियान व्यापक वा केहि गतिविधिहरुमा विशिष्ट हुन सक्छ।
साइट वा पृष्ठमा आएका आगन्तुकहरू पुन: प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यो हो पिक्सेल-आधारित retargeting र वेब ब्राउज गर्दा मात्र विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्दछ।
आगंतुकहरू जसले शपिंग कार्ट दर्ता गरेर वा छोडेर रूपान्तरण प्रक्रिया शुरू गर्छन्। यो हो सूचीमा आधारित retargeting र निजीकृत प्रदर्शन विज्ञापनहरू साथै मोबाइल र ईमेल सन्देशहरू लागू गर्न सक्दछ किनकि वास्तवमा तपाईंसँग सम्भाव्यताको पहिचान छ।
पुन: मार्केटिंग बनाम रीमार्केटिंग
जबकि सर्तहरू प्राय: विनिमेय प्रयोग गरिन्छ, पुनरागमन अधिकतर पिक्सेल-आधारित विज्ञापन वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ र बजारीकरण उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूलाई पुन: संलग्न गर्नका लागि सूची-आधारित प्रयासहरू वर्णन गर्न प्रायः प्रयोग गरिन्छ। परित्याग गरिएको किनमेल कार्ट अभियान प्रायः सबै भन्दा उच्च रूपान्तरण दर उत्पादन गर्दछ र मार्केटिंग लगानीमा फिर्ता।
व्यवहार retargeting के हो?
प्राथमिक retargeting केवल एक साइट विशेष पृष्ठ भ्रमण गरेको जो तपाइँको विज्ञापन धक्का छ, वा तपाइँको साइट मा एक चेकआउट प्रक्रिया त्यागे। यद्यपि आधुनिक प्रणालीहरूले वास्तवमा व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई अवलोकन गर्न सक्दछ जब उनीहरू वेब ब्राउज गर्छन्। तिनीहरूको जनसांख्यिकीय, भौगोलिक, र व्यवहार जानकारी जानकारी रूपान्तरण को संभावना बढाउन र समग्र विज्ञापन लागत घटाउन को लागी निजीकृत र समयमै विज्ञापन छन्।
रणनीतिहरू पुनःप्रसार गर्दै
डिजिटल मार्केटिंग जॉबहरू, डिजिटल मार्केटिंग रोजगारहरू खोज्नको लागि बेलायतको साइटमा Iva Krasteva, उनको भर्खरको लेखमा retargeting रणनीतिहरूको प्रकारहरू विवरण दिन्छ, Ret 99 विपणन तथ्या्क विपणकहरु को लागी यसको महत्व प्रकट गर्न!
यो प्रकार समयको २ 26.1.१% लाई अपनाईन्छ।
यसले ईमेल अभियान सिर्जना गरेर कार्य गर्दछ जहाँ तपाईंको ईमेलमा क्लिक गर्ने जो कोहीले अब तपाईंको विज्ञापनहरू देख्न सुरू गर्दछ। विशिष्ट दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न र उनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूलाई रुचि राख्ने कुराको लागि निर्देशन दिन तपाईंले निर्दिष्ट ईमेलहरूको सूचिहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
यो HTML मा कोड retargeting द्वारा वा तपाईंको ईमेलको हस्ताक्षर द्वारा गरिन्छ।
साइट र गतिशील retargeting
यस प्रकार प्राय: .87.9 XNUMX.%% को दरमा अपनाईन्छ।
यो जहाँ एक उपभोक्ता वास्तव मा तपाइँको साइट मा अवतरण गरेको छ र तपाइँ उपभोक्ता पुन: आकर्षित गर्न सही समयबद्ध निजीकृत विज्ञापन रोप्न को लागी उनिहरु को अगले केहि ब्राउज खोजकर्ता ट्रैक।
यो कुकीजको प्रयोगबाट गरिन्छ। जब उपभोक्ताहरू कुकीहरूसँग सहमत हुन्छन् उनीहरूको ब्राउजिंगलाई पहुँचयोग्य बनाउन अनुमति दिन तिनीहरू सहमत हुन्छन्। यद्यपि कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्न सकिदैन। साधारणतया एक IP ठेगाना र जहाँ त्यो IP ठेगाना खोजी गरिएको छ प्रयोग गर्न सक्षम छ।
खोज्नुहोस् - खोजी विज्ञापनहरूको लागि पुन: बजार सूचीहरू (RLSA)
यो प्रकार समयको २ 64.9.१% लाई अपनाईन्छ।
यो प्रत्यक्ष मार्केटर्स द्वारा काम गर्दछ, भुक्तान गरिएको खोज इञ्जिनमा, उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको खोजीहरूको आधारमा विज्ञापनको ट्रेलको साथ सहि पृष्ठमा मार्गदर्शन गर्न।
यो पहिले कि भुक्तान गरिएको विज्ञापनमा क्लिक गर्ने र खोजीमा निर्भर गरेर तपाईले अधिक विज्ञापनको साथ उपभोक्ताहरूलाई पुनः नेतृत्व गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरूलाई तपाईले हेडिंग गर्न आवश्यक पर्ने दिशामा लैजानु हुन्छ।
भिडियो विज्ञापन प्रति वर्ष %०% ले वृद्धि भइरहेको छ इन्टरनेट ट्राफिकको %०% भन्दा बढि भिडियोमा आधारित छ।
यो काम गर्दछ जब उपभोक्ता तपाईंको साइट भ्रमण गर्दछ। तपाईं त्यसोभए तपाईं प्लेटफर्म भित्र खरीदको प्रत्येक स्तरमा तिनीहरूको व्यवहार ट्र्याक गर्नुहोस्। जब त्यसोभए तपाईंको साइट छोडिन्छ र ब्राउज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ तपाईं रणनीतिक भिडियो पुनः प्रदर्शन विज्ञापनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। उपभोक्ताको रुचिहरूलाई लक्षित गर्नको लागि यी निजीकृत गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई साईटमा फर्काउन।
यो इन्फोग्राफिक विवरण प्रत्येक तथ्याistic्क विवरण जुन तपाईं कहिले retargeting को बारे मा जान्न चाहानुहुन्छ, आधारभूत सहित, कसरी मार्केटर्स रणनीति हेर्छ, ग्राहकहरु यसको बारे के सोच्दछन्, पुन: मार्केट बनाम बनाम, कसरी ब्राउजरमा काम गर्दछ, कसरी मोबाइल अनुप्रयोगहरु संग काम गर्दछ, प्रकार retargeting, सामाजिक मिडिया retargeting, retargeting प्रभावकारिता, कसरी retargeting सेट अप, retargeting को लक्ष्य, र retargeting प्रयोग केसहरु को।
पूरा लेख पढ्नको लागि डिजिटल मार्केटिंग कार्यहरू अवश्य हेर्नुहोस्, Ret 99 विपणन तथ्या्क विपणकहरु को लागी यसको महत्व प्रकट गर्न! - योसँग जानकारी को एक टन छ!
टैग: परित्याग शपिंग कार्टडिजिटल मार्केटिंग रोजगारहरूडिजिटल मार्केटिंग रोजगार ब्रिटेनफेसबुक पिक्सेलपुन: बजार कसरी काम गर्दछकसरी retargeting काम गर्दछइवा क्रस्टेवामोबाइल अनुप्रयोग पुन: बजारपिक्सेल-आधारित विज्ञापनबजारीकरणपुन: बजार इन्फोग्राफिकभिडियो retargeting